I-CBD kanye Nezempilo | Inketho Yakho Yezempilo Engcono Kakhulu ngo-2020
I-CBD kanye nezeMpilo
Izinzuzo ze-CBD nezempilo
Izakhiwo Zokukhulisa ze-CBD kanye nezeMpilo
Izitayela zemfashini zivame ukubuna, kepha i-CBD isazohlala. Eqinisweni, i-cannabis isetshenziselwe izinkulungwane zeminyaka ngezinhloso ezahlukahlukene, ikakhulukazi ezokwelapha. Ukukunikeza umbono, ukubalulwa kokuqala kwezinsuku zokusebenzisa insangu kusuka ku-2300 BC, encwadini yamaShayina ebizwa ngeShu King. Bazisebenzisela ukwenza izintambo nezingubo nokwelapha i-rheumatism kanye nobuhlungu obukhulu bokuya esikhathini. Ukuguquguquka kwalesi sitshalo akuyona into entsha.
Yize kusobala ukuthi i-CBD okwamanje ibhekene nesikhathi sobukhazikhazi obukhulu, sifuna ukucabanga ukuthi kuyenzeka ngoba, ekugcineni, nangemva kweminyaka eminingi, ulwazi olucacile nolunembile ngalesi sakhi sezitshalo ze-cannabis Sativa luyatholakala kulezi zinsuku. Ukwanda kwezifundo ezidumisa nokuqinisekisa izinzuzo zale ngxenye, kanye nokushicilelwa kwazo, ngokungangabazeki kusize ekuqinisekiseni lokho abantu abaningi abakade bekusola: I-CBD iqukethe izinzuzo eziningi zezempilo.
CBD noma i-cannabidiol i-cannabinoid etholakala esitshalweni se-cannabis. Kwama-cannabinoid angaphezu kwekhulu akhona ku- insangu Izitshalo zeSativa, yingxenye efundwa kakhulu, enekhono elikhulu kakhulu lokwelapha futhi elingcono kakhulu kumuncwa uhlelo lwethu. Obhekene nalokhu kumunca ama-cannabinoid receptors atholakala kumaseli kuwo wonke umzimba womuntu, ikakhulukazi ebuchosheni nasemasosheni omzimba. Ukusetshenziswa kwe-CBD kubangela ama-cannabinoid receptors ukuthi asebenze futhi abophe ebusweni bamaseli, okuholela ohlelweni lwe-endocannabinoid olusebenzayo nolunempilo.
Futhi, manje, uzozibuza ukuthi luyini uhlelo lwe-endocannabinoid futhi lwenzelwe ini? Yize kuyisistimu eyinkimbinkimbi ngokumangazayo, singafingqa ukuthi lolu hlelo lubandakanyekile ezinqubweni eziningi zomzimba, njengokulawulwa kokuqonda kobuhlungu, kanye nokusebenza kwenhliziyo, kwamathumbu, nokwesibindi, okwenza leyo CBD kanye nempilo zihlobene ngokuqinile.
Kepha manje, ake sikhulume ngamaqiniso. I-CBD ingangisiza kanjani? Ukusetshenziswa kokwelashwa kwale nto kwaziwa kaningi futhi kuncane. Ngokwesayensi, kufakazelwe ukuthi kunciphisa futhi kuvimbele ukuvuvukala kanye nesicanucanu, isifo sikashukela, ukuqwasha, ukucindezeleka kwangemva kwenhlekelele, isifo sengqondo, isifo samathambo, izifo zenhliziyo, i-antipsychotic, i-anxiolytic, kanye ne-analgesic, ngokumelene nobuhlungu be-neuropathic kanye ne-muscle spasms, ngokwesiko kunzima ukwelapha ngeminye imithi, ngisho nangokwemithi. Kubuye kube ukwelashwa okunamandla kwesifo sokuwa, i-multiple sclerosis, kanye nokulwa nokuphelelwa isifiso sokudla. Ngaphezu kwalokho, ngokungafani ne-THC, Inqwaba ye-CBD akuyona into ethinta ingqondo, kunalokho, inemiphumela yokudambisa nokutholisa. Kuyamangalisa iqiniso?
Manje mhlawumbe ucabanga ukuthi ungayitholaphi imikhiqizo yalolu hlobo? Kunezinkampani eziningana eziqale i-CBD adventure kodwa zimbalwa ezikwazi ukwanelisa amazinga okufunwa kwabathengi. Ngaphandle kokungabaza, i-Red Emperor CBD ingomunye wabasabalalisi be-CBD abathembeke kakhulu. Inkampani esencane emikhiqizweni yayo idlula kakhulu okulindelwe yinoma ngubani owazi ukuhlukanisa phakathi kwemikhiqizo esezingeni eliphakathi nendawo nekhwalithi ephezulu. Kokubili ekunambithekeni nasephunga lamaqabunga ayo aqinile, ungakwazisa ukunakekelwa kokutshalwa kwe-hemp yezimboni, kuhlolwe ngokuphelele nokuthi kudalwe izimo ezifanele ukuthola umkhiqizo we-premium. Ngaphansi kuka-0.3% iTHC kuzo zonke izinhlobo zayo, yonke imikhiqizo ye-Red Emperor CBD ivela kulinywa lwe-organic industrial hemp.
Amafutha e-CBD avela ku-Red Emperor CBD angaba yisixazululo esihle kuwe. Ukusetshenziswa kwezilimi ezimbili, lo uwoyela ogcwele ungakusiza ulale, ngakho-ke, ujabulele ukuphumula okuphumula, okunzima kakhulu ukukufeza ngezigaba zengcindezi noma zokukhathazeka. Kuyasebenza kakhulu ekulweni nobuhlungu futhi kungaba ngenye indlela yokuqeda izinhlungu. Phakathi kwezicelo zayo ezifakazelwe, eziqashwe nguchwepheshe nangamanani athile, kukhonjiswe ukuthi kuthuthukisa ikhwalithi yempilo yabantu abaphethwe yiParkinson's kanye nesifo sokuwa.
Njengoba ubona, akudingekile ukuthi usebenzise izidakamizwa eziluthayo ezinemiphumela emibi eyingozi. Ungazama i-CBD futhi impilo yakho ngokuqinisekile izothuthuka. Imvelo ihlakaniphile futhi isinikeza konke esikudingayo ngempilo yethu nenhlalakahle yethu, kungani ungasebenzisi ithuba layo?
PreviousPost Previous:Yini uwoyela we-CBD? | Umkhiqizo omuhle kakhulu ka-2021OlandelayoPost Next:Ukunakekelwa Kwesikhumba se-CBD NoSam Cheow, Owayeyilungu Lokuqala LakwaLaurel VP